अंग्रेजी उपन्यास - विकिपीडिया
यो एउटा अनाथ (एक्लो) पृष्ठको रुपमा छ, यो पृष्ठ कुनै पनि पृष्ठसित नजोडिएको अथवा एक-दुइवटा वटासित मात्र जोडिएको हुन सक्छ। कृपया सम्बन्धित लेखबाट; यस पृष्ठसित लिङ्क जोड़्न सहायता गर्नुहोस् सुझाव यहाँ उपलब्ध हुनसक्छ। (अक्टोबर २०११)
अङ्ग्रेजी उपन्यास विश्वका महान् साहित्यको विशिष्ट अंग छ। फील्डिंग, जेन औस्टिन, जार्ज इलियट, मेरेडिथ, टमस हार्डी, हेनरी जेम्स, जन गाल्सवर्दी र जेम्स ज्वयसका समान उत्कृष्ट कलाकारहरूको कृउनले उसलाई समृद्ध गरेको छ। अङ्ग्रेजी उपन्यास जीवनमा मर्मभेदी दृष्टि हाल्दछ, उनको समुचित व्याख्या गर्दछ, सामाजिक अनाचारहरूमा कठोर आघात गर्दछ र जीवनका मर्मलाई ग्रहण गर्नको अप्रतिम प्रयास गर्दछ। अङ्ग्रेजी उपन्यासले अमर पात्रहरूलाई एक लामो पंक्ति पनि विश्व साहित्यलाई दिएको छ। त्यो इङ्गल्याण्डका सामाजिक इतिहासलाई एक अपूर्व झाँकी प्रस्तुत गर्दछ।
अङ्ग्रेजी उपन्यासको प्रेरणाका श्रोत मध्यकालीन ऐंग्लो-सैक्सन रोमान्स थिए, जसको अद्भुत घटनाहरू र कथाहरूले परवर्ती कथाकारहरूको कल्पनालाई उडनको लागि पंख दिए। यो रोमान्स जीवनको वास्तविकताहरूका अतिरन्जित चित्र थिए र अलेक्जेन्डर अथवा ट्रय आदिका युद्धहरूबाट सम्बन्ध हुन्थे। यस्तो प्राचीन रोमान्स अगाडि चलेर गद्य रूपमा पनि प्रस्तुत भए। यिनीहरूमा सर टमस मैलरीको ‘मौर्त द आर्थर’ (१४८४) विशेष उल्लेखनीय छ। गद्यमा कथा भन्नको इङ्गल्याण्डमा यो पहिलो प्रयास थियो। अङ्ग्रेजी उपन्यासका इतिहासमा यसै प्रकारको अन्य कृतीहरू सर टमस मोरको ‘यूटोपिया’(१५१६) र सर फिलिप सिडनीको ‘आर्केडिया’(१५९०) थियो।
केहि इतिहासकार जन लिली (१५५४-१६०६)का उपन्यास ‘यूफुइस’ (१५८०)लाई पहिलो अङ्ग्रेजी उपन्यास भन्दछन्। कुन रचनालाई पहिलो अङ्ग्रेजी उपन्यास भनिय, यस सम्बन्धमा धेरै केही मतभेद संभव छ, तर अङ्ग्रेजी उपन्यासका इतिहासमा युफुयसको उल्लेख अनाएस हुन जाँदछ। यस उपन्यासको भाषा धेरै केही कृत्रिम र आलंकारिक हो तथा अँग्रेजी गद्यका विकासमा यस शैलीको धेरै प्रभाव लडेको थियो। अङ्ग्रेजी दरबारी जीवनको यस उपन्यासमा सजीव र यथार्थ चित्रण छ।
एलिजाबेथका युगमा शेक्सपियरका पूर्ववर्ती लेखकहरूले अनेक उपन्यास लेखहरू, जसमध्ये केहीले शेक्सपियरलाई तिनका नाटकहरूका कथानक पनि प्रदान गरे। यस्तो रचनाहरूमा रबर्ट ग्रीन (१५६२-९२)लाई ‘पैडोस्टो’और टमस लज (१५५८-१६२५)को ‘रोजेलिंड’उल्लेखनीय छ। टमस नैश (१५६७-१६०१) पहिले अङ्ग्रेजी कथाकार थिए जसले यथार्थवाद र व्यंगलाई अपनाए। तिनका उपन्यास ‘दि अन्फार्चुनेट ट्रैवेलर र दि लाइफ औव जैक विल्टन’मा जीवनका बहुरंगी चित्र छन्। कथाको नायक विल्टन देश-विदेशहरूमा घूमता-फिर्दछ र कथानक घटनाहरूका विचित्र जालमा गुँथा छ। एलिजाबेथ युगीन लेखकहरूमा टमस डेलानी (१५४३-१६००)लाई पनि उपन्यासकार भनिएको छ। तिनका उपन्यास ‘जैक औव न्यूवरी’मा एक तरुण जुलाहेको वर्णन हो जुन आफ्नो स्वामीको विधवाबाट विवाह गरेर समृद्ध जीवन बिताँदछ।
१७औं शताब्दीमा रोमान्सको पुनरुत्थान भयो, यस्तो कथाहरूको जसको उपहास ‘डन क्विग्जोट ’मा गरिएको छ। अङ्ग्रेजी उपन्यासको यी रचनाहरूको कुनै विशेष महत्व छैन। अङ्ग्रेजी उपन्यासमा एक महत्वपूर्ण कदम जन बन्यन (१६२८-१६८८)को उपन्यास ‘दि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस’था। यो कथा रूपक हो जसमा कथा नायक क्रिश्चियन अनेक बाधाहरूको सामना गर्दो आफ्नो लक्ष्यसम्म पहुँच्दछ।
डिफो (१६६१-१७३१)को रचनाहरूको अङ्ग्रेजी उपन्यासका विकासमा धेरै प्रभाव लडयो। उनले यथार्थवादी शैलीलाई अपनाए, र जीवनको गतिको भाँति नैं तिनका उपन्यासहरूको गति थियो। उनको उपन्यास ‘रबिन्सन क्रूसो’अत्यन्त लोकप्रिय भयो। यसका अतिरिक्त पनि उनले अनेक महत्वपूर्ण रचनाहरूको सृष्टि गरयो।
स्विफ्ट (१६६७-१७४५) आफ्नो उपन्यास ‘गुलिवर्स ट्रैवेल्स’मा मानव जातिमा कठोर व्यंग प्रहार गर्दछन्, यद्यपि ती व्यंगलाई अनदेखा गरेर अनेक पिउँढीहरूका पाठकहरूले उनको कथाहरूको रस लिएको छ।
१८औं शताब्दीमा इङ्गल्याण्ड]]मा चार उपन्यासकारहरूले अङ्ग्रेजी उपन्यासलाई प्रगतिको मार्गं देखायो। रिचर्ड्सन (१६८९-१७६१)ले आफ्नो उपन्यासहरूबाट मध्यम वर्गका नयाँ पाठकहरूलाई परितोष प्रदान गरे। यिनका तीन उपन्यासहरूका नाम छन्-‘पैमेला’, ‘क्लैरिसा हालहरू’और ‘सर चार्ल्स ग्रांडीसन’। रिचर्ड्सनको रचनाहरू भावुकताबाट भरी थिए र उनको नैतिकता संदिग्ध थियो। यी त्रुटीहरूको आलोचनाको लागि फील्डिंग (१७०७-१७५४)ले आफ्नो उपन्यास, ‘जोजेफ ऐंड्र्यूज’, ‘टाम जोन्स’, ‘एमिलिया’और ‘जोनेथन वाइल्ड’लिखे। यी रचनाहरूले अङ्ग्रेजी उपन्यासलाई दृढ धरातल र विकासको लागि ठोस परम्परा प्रदान गरयो। १८औं शताब्दीमा जस चार उपन्यासकारहरूले अङ्ग्रेजी उपन्यासको विशेष समृद्ध गरे तिनमा दुइ अन्य नाम स्मलेट (१७२१-१७७१) र स्टर्न (१७१३-१७६८)का छन्। यस शताब्दीको एक र महत्वपूर्ण उपन्यास थियो गोल्डस्मिथ (१७२८-१७७४)को ‘दि विकार औव वेकफील्ड’।
सर वाल्टर स्कट (१७७१-१८३२) र जेन मास्टिन (१७७५-१८१७)को कृतीहरू अङ्ग्रेजी उपन्यासको निधि छ। स्कटले अङ्ग्रेजी इतिहासको कल्पनारंजित र रोमानी चित्रण आफ्नो उपन्यासहरूमा गरे। स्कटल्याण्डका जनजीवनको अनुपम अंकन पनि हामीलाई उनको कृतिहरूमा मिल्दछ। स्कट इङ्गल्याण्डका सबै भन्दा सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार छ। उनको रचनाहरूमा ‘आइवनहो’, ‘केनिथवर्थ’और ‘दि टैलिस्मान’की धेरै ख्याति छ। जेन आस्टिन मध्यवर्गीय नारी जीवनको कुशल कलाकार छन्। तिनीहरू व्यंग र निर्ममताबाट पात्रहरूलाई प्रस्तुत गर्छ। बाह्य जीपनको यति सजीव अंकन साहित्यमा दुर्लभ छ। जेन औस्टिनको रचनाहरूमा ‘प्राइड ऐंड प्रेजुडिस’, ‘एमा’और ‘पर्सुएशन’को विशेष ख्याति छ।
१९औं शताब्दीका उत्तरार्धमा अङ्ग्रेजी उपन्यास प्रगतिका शिखरमा पुगयो। यो डिफेन्स (१८१२-१८७०) र थैगरियोस् (१८११-१८६३)को युग छ। यस युगका अन्य महान उपन्यासकार जर्ज इलियट, जर्ज मेरेडिक, ट्रोलोप, हेनरी जेम्स आदि छ। डिकेन्स इङ्गल्याण्डका सबै भन्दा अधिक लोकप्रिय उपन्यासकार छ। उनले पिकविकका समान अमर पात्रहरूको सृष्टिको जुन अङ्ग्रेजीका पाठकहरूको स्मृतिमा सदाको लागि घर गरेर चुके छन्। डिकेन्सले आफ्नो कालको कुरीतिहरूमा पनि आफ्नो साहित्यमा कठोर प्रहार गरे। उनले बच्चाहरूको वेदनालाई आफ्नो कृतिहरूमा मार्मिक अभिव्यक्ति दी। कानूनको उलझनहरू, सरकारी दफ्तरहरू केचक्र, फैक्टरीहरूमा मजटाडाहरूका कष्ट आदि विषयहरूको पनि डिकेन्सको कृतिहरूमा सशक्त अंकन छ। तिनका उपन्यासहरूमा ‘पिकनिक पेपर्स’, ‘औलिवर ट्विस्ट’, ‘ओल्ड क्यूरिऔसिटी शप’, ‘डेभीड कपरफील्ड’, ‘ए टेल औव टू सिटीज’, ‘ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स’, आदि विशेष महत्वपूर्ण छ।
डिकेन्सका समकालीन थैगरियोस्ले आफ्नो युगका महत्वाकांक्षी र पाखण्डी मानिसहरूमा आफ्नो कृतिहरूमा कठोर प्रहार गरे। थैगरियोस्को साहित्य परिमाणमा अपेक्षाकृत कम छ, तर आधा दर्जन स्मरणीय उपन्यासहरूमा उनले बेकी शार्प र बिट्रिक्स जस्तै पात्रहरूको विफलताको मार्मिक अंकन गरे। थैगरियोस्का उपन्यासहरूमा गहिरो वेदना छिपी छ। संसार तिनलाई एक विराट् मेला प्रतीत हुन्थ्यो। तिनका उपन्यासहरूमा ‘वैनिटी फेयर’, ‘हेनरी एस्मंड’, ‘पेन्डेनिस’ तथा ‘दि न्यूकम्स’विशेष महत्वपूर्णका छन्।
विक्टोरिया युगमा अनेक महत्वपूर्ण कलाकारहरूले अङ्ग्रेजी उपन्यासलाई समृद्ध गरे। डिजरेली (१८०४-१८८१)ले राजनैतिक उपन्यास लेखहरू, बुलबर लिटन (१८०३-१८७३)ले ‘दि लास्ट डेज औव पांपेई’केबाट सफल ऐतिहासिक उपन्यास लेखहरू। चार्ल्स किंग्सली (१८९१-१८७५)ले ‘वेस्टवर्ड’हो र ‘हिपैशिया’केबाट उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास अङ्ग्रेजीलाई दिए। यसै प्रकार चार्ल्स रोड (१८१४-१८८४), चार्लेट ब्रौन्टे (१८१६-१८५५), ऐमिली ब्रौन्टे (१८१८-१८४८), मिसेज गैस्केल (१८१०- १८६५), विल्की कलिन्स (१८२४-१८८९) आदिका नाम अङ्ग्रेजी उपन्यासका इतिहासमा स्मरणीय छ।
जार्ज इलियट (१८१९-१८८०)को गणना इङ्गल्याण्डका महान् उपन्यासकारहरूमा छ, यद्यपि कालका प्रवाहले आज उनको कलाको मूल्य कम गरेर दिइएको हो। तिनका विशेष सफल उपन्यासहरूमा ‘साइलस मार्नर’, ‘ऐडम बीड’, ‘दि मिल औन दि फ्लास’और ‘रामोला’के नाम छन्। ऐंटनीट्रौलौप (१८१५-८२)ले बारसेट नामका क्षेत्रको अंतरंग चित्रण आफ्नो उपन्यासहरूमा गरे र स्थानीय रंगको महत्व उपन्यास साहित्यमा प्रतिष्ठित गरे। मेरेडिथ (१८२८-१९०९)ले आफ्नो पात्रहरूको मानसिक उलझनहरूको विशद व्याख्या आफ्नो उपन्यासहरूमा प्रस्तुत गरयो। यिनीहरूमा ‘इगोइस्ट’की धेरै ख्याति भए। मनोवैज्ञानिक गुत्थीहरूलाई सुलझा्ने प्रयास हेनरी जेम्स (१८४३-१९१६)को कलामा उपन्यासलाई अंतर्मुखी रूप दिन्छ। टमस हार्डी (१८४०-१९२८) विश्वका विधानमा कठोर आघात गर्दछन् र मनुष्यलाई जीवन शक्तिहरूका असहाय शिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। हार्डीले अङ्ग्रेजी उपन्यासलाई गाढे क्षेत्रीय रंगमा पनि रँगा। तिनका उपन्यासहरूमा ‘दि रिटर्न औव दि नेटिव’, ‘दि मेयर औव कैस्टरब्रिज’, ‘टेस’, र ‘ज्यूड दि आब्सक्योर’ महत्वपूर्ण छ।
आधुनिक कालमा एक पटि त मनोविश्लेषणवादकहरू महत्व बढयो जसका कारण अङ्ग्रेजी उपन्यासमा ‘चेतनाका प्रवाह’नामको प्रवृत्तिको उदय भयो। दोस्रो पटि जीवनका सूक्ष्म तर व्यापक रूपलाई समझनेका प्रयास,को पनि विकास भयो। जेम्स ज्वयस (१८८२-१९४२) रचित ‘यूलिसीज’उपन्यास मनका सूक्ष्म र महान व्यापारहरूको अध्ययन प्रस्तुत गर्दछ। तिनैका समान वर्जीनिया वुल्फ (१८८२-१९४१) र डरोथी रिचर्ड्सन पनि ‘चेतनाका प्रवाह’की शैलीलाई अपनान्छ। एच. जी. वेल्स (१८६६-१९४६), आर्नल्ड बैनेट (१८६७-१९३१) र जन गाल्सवर्दी (१८६७-१९३३)को कृतीहरू अङ्ग्रेजी उपन्यासको आधुनिक शक्तिको अनुभव पाठकलाई गराँदछन्। वेल्स सामाजिक र वैज्ञानिक समस्याहरूलाई आफ्नो रचनाहरूमा उठाँदछन्। आर्नल्ड बैनेट यथार्थवादी दृष्टिबाट इङ्गल्याण्डका ‘पाँच नगर’ शीर्षक क्षेत्रको सूक्ष्म चित्रण गर्दछन्। गाल्सवर्दी इङ्गल्याण्डका उच्च मध्यवर्गीय जीवनको व्यापक झाँकी फोर्साइट नामका परिवारका माध्यमबाट दिन्छन्। डी.एच. लरेन्स (१८८५-१९३०) र आल्डस हक्सले (१८९४-१९६३) आजका प्रमुख अङ्ग्रेजी उपन्यासकारहरूमा उल्लेखनीय छन्। यसै श्रेणीमा ई.एम. फर्स्टर (१८७९-१९७०), ह्यू वालपोल (१८८४-१९४१), जे.बी. प्रीस्टले (१८९४) र समरसेट मम (१८७४-१९५८) पनि छन्।
बाहिरी कडीहरू [सम्पादन गर्ने]
"http://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=अंग्रेजी_उपन्यास&oldid=322694" बाट निकालिएको	श्रेणीहरु: अङ्ग्रेजी साहित्यहिन्दीबाट अनुवादित	नेविगेशन मेनू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०७:५२, ९ मार्च २०१३ मा परिवर्तन गरिएको थियो।